The I-Medialink I-router ibhekwa njenge-router engenantambo ngoba inikeza ukuxhumana kwe-Wi-Fi. I-wireless nje noma i-Wi-Fi ivumela nje ukuxhumanisa amathuluzi amaningana ngokwesibonelo amathelevishini ahlakaniphile, amaphrinta angenazintambo, nama-Smartphones avumelekile we-Wi-Fi.
Amathiphu wephasiwedi ye-MediaLink Router:
Khetha ukhiye wokungena oyindida futhi onzima wokuqagela weMediaLink yakho ozoyikhumbula nje.
Kufanele kube into eyimfihlo, isibonelo [i-imeyili ivikelwe], kusho ukuthi awusoze wehluleka ukuyikhumbula.
Umthamo wokuphepha uncike ngqo ekubambeni kukhiye wokungena, nemizamo ethathwe ukuvikela ukhiye wokungena we-router yakho.
Nikeza ngokhiye Wokudlula werutha ozoyikhumbula (ukusebenziseka kuqala). Akudingekile ukusho, ungakha ukhiye wokudlula oyinkimbinkimbi onezinhlamvu ezihlukene, izinombolo, isiGreki nesiLatini. Kodwa-ke ekugcineni uzogcina ngokuyifaka ku-Sticky futhi uyibeke ku-router eshaya inhloso.
I-Alter Default Default name (SSID) & Passkey plus inika amandla Ukubethela Kwenethiwekhi
Iseluleko esincane esingeziwe (njengoba singenawo umthelela kwezokuphepha), esokushintsha igama le-Wifi Ezenzakalelayo (SSID) njengoba kuzoqondakala kangcono kwabanye ukwazi ukuthi iyiphi inethiwekhi abaxhuma kuyo.
• Cinga - Ukusetha Okuthuthukile (okutholwe ebhokisini lemenyu phezulu ekhasini eliyisiqalo), bese ucindezela kuso
• Cinga - Ukusetha okungenantambo (kubonakale ebhokisini lemenyu phezulu ekhasini eliyisiqalo), bese uyishaya
• Cinga i- - Basic Wireless Setting (ebonwa ebhokisini lemenyu phezulu ekhasini eliyisiqalo), bese uyishaya
Sesha Amagama Enethiwekhi (SSID), leli igama le-Wi-Fi Lomzila. Ngemva kokubhala igama lenethiwekhi, kufanele uvumele ukubethela kwe-WPA2-PSK kumzila. Leli izinga lokubethela eliqine kakhulu elitholakala kumanethiwekhi asekhaya.
Faka okhiye bamuva bokwabelana be-WPA / WI-Fi Passkey yakamuva - lona ukhiye wokudlula ozowusebenzisa ukuxhumanisa ne-Wi-Fi esekhaya. Yenze amafonti ayi-15-20 futhi ungasebenzisi ukhiye wokungena ofanayo owusebenzisele ukungena ngemvume kwe-MediaLink.
Izinkinga zokungena ngemvume zeMediaLink:
Ukhiye Wokudlula weMediaLink awusebenzi
Ama-passkeys athola indlela yokungasebenzi! Noma, emicimbini eminingi, amaklayenti athola indlela yokuwakhumbula. Kuzona zozimbili lezi zimo, bheka isigaba “Sokusetha Kanjani I-Router ye-MediaLink Ukusetha Okuzenzakalelayo”.
Ukhohlwe ukhiye wokudlula ku-MediaLink Router
Noma ngabe uguqule amagama wabasebenzisi noma amaphasiwedi we-MediaLink & ukhohliwe noma cha, vele ubone "Indlela Yokusetha kabusha i-Router ye-MediaLink Ukusetha Okuzenzakalelayo".
Setha kabusha i-Router kuzilungiselelo ezizenzakalelayo
Njengoba, ukuphepha kwenethiwekhi kubalulekile, umsebenzi wokuqala nokubaluleke kakhulu ukuguqula i-MediaLink router Default Login & Passkey ibe yinto ephephe kakhulu futhi eyimfihlo.
Landela imiyalo ukuze ungene ngemvume kuMzila weMediya.
Xhuma i-router yocingo kwi-Laptop noma kwi-PC. …
Vakashela isiphequluli sewebhu sokukhetha bese ubhala ikheli le-IP lomzila we-Medialink ebhokisini lekheli. …
Okulandelayo bhala amagama abasebenzisi namaphasiwedi we-router okuzenzakalelayo ukufinyelela ikhonsoli yomlawuli. Manje ungene ngemvume.
Izigaba Brand Imeyili kwemikhumbi